MPANAO POLITIKA SY SATANA – MyDago.com aime Madagascar
MPANAO POLITIKA SY SATANA
Mihorohoro indray ny “gasy” manolohana ny asan’i satana. Mbola tanàna telo na efatra eto Madagasikara aloa no isehoan’ity tranga ity hatramin’izao.
Fa inona no antony tena mampirongatra ny asan’i satana eo amin’ny firenena iray?
Rehefa misy ny korontana, rehefa afafy ny fifandrafiana sy ny fifankahalàna. Rehefa voahitsakitsaka ny fahamarinana ka manjaka ny kolikoly sy ny vola ary ny fitiavan-tena. Ary ny loza indrindra dia rehefa misy ny olona atao sorona amin’ny alàlan’ny fandatsahan-drà.
Tsy iresaka ny tranga tamin’ny fanjanahantany eto fa fakafakaina ny toe-draharaha politika sy ny asan’i satana, teto amin’ny Firenena malagasy, nanomboka tamin’ny taona 1971. Nisy ran’ny Malagasy amin’arivony latsaka tany Atsimo. Nisy Mpitondra fiavavahana vahiny iray, teratany amerikana, noroahina teto Madagasikara, noho ny antony tsy dia nazava loatra. Nisy Minisitra tao amin’ny fitondram-panjakana nosamborina sy nampidirina am-ponja satria voapanga ho nifandray tendro tamin’ny Amerikana. Ny taona 1972, nisy ihany koa ny ra latsaka. Nisy ny doro-trano, anisan’ireny ny Lapan’ny Tanàna. Andro vitsy taorian’io dia nirodana ny fitondrana tamin’ny Repoblika voalohany. Tsy mbola tsapa loatra tamin’izany fa nisy tokoa ny asan’ilay mpanjakan’ny maizina. Satria efa nisy ny “francs maçons” dia mety ho tadidin’ireo zokiolona amin’izao fotoana ny raharaha “Au Rendez-vous des Chasseurs”, izay ireo mpanankarena teto no tafiditra tamin’izany.
Madagasikara rahateo tao anatin’ny “Communauté française”, mitovy amin’ny “France-Afrique” ankehitriny.
Ny taona 1985, nampivarahontsana ny raharaha TTS, Pochard, sy ny « Kung Fu ». Ny tranga marina tamin’ireo dia tsy azo nandalovana harvariva teo amin’ny Pochard fa na voendaka, na nisy naka an-keriny. Ireo mpikatroka Kung Fu indray dia voalaza fa
nitondra tavoahangy kely, nisy ody, tany ambalahany. Nandriaka ny ra tamin’ireo raharaha roa ireo. Ny TTS dia tena miaramilan’i satana, satria nampihorohoro ny teto Antananarivo toko izy ireo. Raha ny mpanao haiady kung fu indray dia raha ny hita amin’ireny sarimihetsika ireny dia misy ny “miaramilan’i satana (mpandrombaka fahefana, mpamono olona, mpampihororhoro, sns…= bandy). Ny an-kilany kosa mpanohitra ny asan’ny maizina = rôla. Amin’izao toe-draharaha politika eto amin’ny Firenena iza odia ny kung fu no anisan’ny mahatsapa fa manjaka eto ny asa ratsin’i satana ary miantso ny olompirenena malagasy hiverina amin’ Andriamanitra.
Enin-taona taty orian’izany, 1991, nirohatra nankeny Iavoloha ny vahoaka ny 10 Aogositra, notarian’ny “Herivelona Rasalama”. Tsy fantatra marina ny isan’ny maty tamin’izany hetsika izany. Nalaza ny fisian’ny “biby tsy fantatra”, nopin’ny Filoham-pirenena tamin’ izany, tao amin’ny Lapan’Iavoloha. Nisy koa, hono, ny hefitra nanaovana fanompoan-tsampy. Nisy koa ny doro-trano. Tsy niasa teny amin’ny Lapam-panjakan’ny Iavoloha mihitsy ny Filoha tamin’izany, Zafy Albert, fa tao Ambohitsorohitra ihany.
Ny Filoha Ravalomanana Marc no nanamboatra ny Lapa rehefa tonga teo amin’ny fitondrana. Nanorina Fiangoanana tao ihany koa izy.
Ny taona 2009, araka ny fanambarana nataon’ny Lietnà kolonely Randrianasoavina Charles dia nilaza ny mpihoko tami’ny fanonganam-panjakana fa mila “ra latsaka” vao hahomby ny tolona. Tsy nahomby mantsy ny ra latsaka sy ny doro-trano ny 26 Janoary.
Nanomboka teo no tena nirongatra ny asa matin’i satana. Niaraha-nahita iny, lazaina fa fandroahana devoly, tao amin’ny fiangonana iray teto andrenivohitra iny. Ny “mpandroaka” devoly indray no nisary devoly. Satria nanomboka nisavoritaka ny toe-draharaha politika. Nanomboka teo ihany koa ny famafazana fifankahalana sy fifandrafiana teo amin’ny samy malagasy. Nanomboka koa ny fitiavam-bola sy harena ary voninahitra. Tsy vitsy ireo nomen’i satana izany. Nahazo vahana tanteraka ireo miaramilan’i satana ka ny taranaka faramandimby no ataony lasibatra ankehitriny. Ny lohany amin’ny fitantanana ny firenena koa moa sady mpanao “mazia mainty” no tsy miasa raha tsy maizina ny andro ary, indrindra, rain’ny lainga. Hatramin’olom-boahositra aza lasa manaonao foana. Tsy mahagaga raha tonga amin’izao ny toe-draharaha.
Ny mpanao politika no lasa miaramilan’i satana ka mangalatra, manao kolikoly, mandainga sy manakahala ary mandrafy ny mpiray firenena aminy. Tsy maintsy ho ireo ihany no hijinja izay nafafiny, ny mampalahelo dia ny taranaka aloa izao no mizaka ny asa ratsin’izy ireo.
Tokony ho tadidy mandrakariva fa Andriamanitra tsy tompon’ny fikotranana fa tompon’ny filaminana. Ka ny mpitondra ankehitriny sy ny mpanao politika dia manome toerana ho an’ny devoly satria tsy mitory “FITIAVANA”.
Teraka ny antoko politika vaovao MMP : Miaramiala Mpanao Politika
Mpiasam-panjakana : miantso ny mpanao politika hamarana ny krizy
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 juin 2012 Catégories Politique
26 pensées sur “MPANAO POLITIKA SY SATANA”
9 juin 2012 à 6 h 54 min
Mampalahelo ny zava-misy ary marina avokoa izay voalaza, nefa aoka isika tsiraiary avy samy handinin-tena satria « devoly sy satana io ».
Ny olon’Andriamanitra aloha dia tsy voakasik’izany na ovina na ovina mihitsy – tsy misy mahatahotra na kely aza fa eto an-tany anie, devoly sy satana é ka tsy maintsy mivavaka isika hanalàna izany.
Aza dia mimenomenona loatra fa satana izany, ary indrindra koa tsarovy fa Andriamanitra manome fiadanam-po. Ary izany indrindra no ivavahana sy itodiana amin’Andriamanitra tompoko.
9 juin 2012 à 9 h 30 min
Efa iarahana mahalala tokoa ankehitriny fa i Marc Valomanana no ambadik’ity Club Satanique ity. Ny porofo moa dia efa tsy takona afenina intsony satria ny olona rehetra mihitsy no manambara ilay izy amin’izao fotoana izao. Ity Valo ity moa dia fangarony daholo na i Satana na ny fiangonana, ampifangaroiny na ny fiangoanana na ny politika. Iarahan’ny rehetra mahalala fa tena niara-nitakosina i Valo sy ingahy Sendrahasina filohan’ny FJKM. Tena niray sy miray hevitra izy roalahy ireo tamin’izay rehetra nataony eny fa na dia ny pacte miaraka ami’ny Satana aza. Ny tenako moa dia protestanta iringiriny tokoa, kanefa dia menatra dia menatra tokoa aho mahita ity filohan’ny fiangonanay ity. Ankaotra io moa dia tena nafangaron’ny pastiora Sendrahasina ny fiangonana sy ny politika. Tamin’ny andron’i Valo tokoa manko dia: ny volam-panjakana malagasy no nanavaozana ny fiangonanay manerana an’i Gasikara, ny fanomezana avy any amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia ny ONG protestanta no nitantatana azy, ny pastiora FJKM manerana an’i Gasikara aza moa dia nampivoarian’i Valo teny Iavoloha ary dia ny volam-panjakana no nanatanterahana izany. Raha tsorina ny resaka dia tena pastiora maimbo ity Sendrahasina ity. Sambatra ny Katôlika na ny Anglikana na ny Loterana fa tsy mba nisy izany firaisana tsikombakomba amin’ny mpangalatra sy mpamono olona toa an’i Valo!
Denise= »SATANA » hiringiriny, hatrany amin’ny tsinaimaintiny!. Denise satana devoly = 2en1
9 juin 2012 à 10 h 17 min
Ho an’i denise : rtahja mboa te-hanohy ny dénigrements fafy lainga fanaratsiana ny Filoha Marc ho mpanompo sampy ianao dia misehoa télé. Hohita eo raha hinoan’ny olona. Mbola hifototra aminareo ny fanaratsina olona io. Ravalo: anarana nomen’ny Ray man-dReniny no lazainao fa avy @ satana.
Fanazavana ho an’i Solo Razafy nanao ity article ity : mpanao Kung Fu ny tenako fa tsy misy idiran’ny satana ny rano eny ambalahana. Aoka hofantatrao fa mpivavaka (chorale FJKM) tao Ambositra i Pierre-be. Tsy hanazava aminao ny antsipiriany aho fa midira kung-fu raha te-hahalala ny filôzôfian’ny rano sy ny toerana ivoahan’ny herin’ny olombelona ka mahatonga ny fehikibo eo am-balahana.
Efa iarahana mahalala tokoa ankehitriny fa i Denise no ambadik’ity Club Satanique ity. Ny porofo moa dia efa tsy takona afenina intsony satria ny olona rehetra mihitsy no manambara ilay izy amin’izao fotoana izao. Ity Denise ity moa dia fangarony daholo na i Satana na ny fiangonana, ampifangaroiny na ny fiangoanana na ny politika. Iarahan’ny rehetra mahalala fa tena niara-nitakosina i Denise sy ingahy Rajoelina filohan’ny HAT. Tena niray sy miray hevitra izy roalahy ireo tamin’izay rehetra nataony eny fa na dia ny pacte miaraka ami’ny Satana aza. I Denise moa dia mpilalao hody iringiriny tokoa, kanefa dia menatra dia menatra tokoa izy mahita ity filohan’ny HAT ity. Ankaotra io moa dia tena nafangaron’ny Denise Mpam’s ny ody sy ny politika. Amin’izao andron’i Andry RADOMELINA izao manko dia: ny volam-panjakana malagasy nangalarina no nanavaona ny tranomora, hopitaly mora, tranombarotra mora, zoma mora, moramora… manerana an’i Gasikara, ny fanomezana avy any amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia ny TGV no nitantatana azy, ny mpanohana an’i HAT manerana an’i Gasikara aza moa dia nampivoarian’i RADOMELINA teny Iavoloha ary dia ny volam-panjakana no nanatanterahana izany. Raha tsorina ny resaka dia tena SATANA DEVOLY ity DENISE ity. Sambatra ny PROTESTANTE, Katôlika na ny Anglikana na ny Loterana fa tsy mba nisy izany firaisana tsikombakomba amin’ny mpangalatra sy mpamono olona toa an’i ANDRINARIANA RADOMELINA SATANA DEVOLY miampy an’i DENISE MPAM’S SATANA DEVOLY!
9 juin 2012 à 11 h 44 min
Tena mahery indry ry Dénise an! Tena miakatra mihitsy ny tambavin’ny zanak’i dada hanaovan-dry azy an! Angamba raha ny sitrapon’izy ireo dia ho potehina amin’i baomba artizanaly mihitsy indry ty an! Fa saingy araka ny ahafantaran’ny maro an-dry dia toy « Vatolampy azo handihizan’ny varatra indry, ka tsy matahotra ny mangoro-vitsika ». Ha! ha! ha!
9 juin 2012 à 12 h 46 min
HO AN I ,Ignace,Imanoela,Manandafy,Raveloson constant ,ary tsy hadino eto i Rakotoarivony mamy sy Me Hanitra ,
reraky ny wawa ny vahoaka .
Dia inona moa fa tsy miverina @ teo aloa indray ny toe-draharaham-pirenena izao!
-Isika dia miverina miwawawa eo @ kianja mikaton’ny MAGRO behoririka manaratsy ny FAT ary tsy nety no tsy mety hatramin’ny farany nanohana na nitarika ny sakoroka an-dalambe hanoherana mivantana ny FAT
-I Rajoelina miverina mampiesona, mivarotra lainga @ hoe hisy fifanarahana milamina mitarika fihaonana mivantana eo @ rajoelina sy dada8, eo @ mouvanse ra8 sy ny mpanohana an’-drajoelina
-Ny sakoroka an-dalambe efa mihen-danja noho ny tsy fahavononan’ny mpitolona ka dia samy mietaka daholo indray izao ny rehetra dia samy miwawawa sy mifandainga ry mivarotra sakabeloha @ mpomba azy tsirairay sy ny vahoaka fotsiny!
Tena adin’akoholahy fataka no misy eto an-tanindrazana! Mifampikopaka kely dia masy mietaka indray, dia miverina mifampikopaka kely indray dia samy mietaka, dia mifampitsaingoka kely indray dia samy mietaka, etc.
Io no scénario hitohy ela dia ela eto fa dia izay tsy mahataty dia ho fatin’ny famoizam-po, na ny AVC, na ny adim-piainana, na ny fanafihana mitam-basy.
Izay mahataty indray dia na hiditra hanao akoholahy fataka na ho spectateur mitazana adin’akoholahy fataka mandritra ny fotoana tsy fantatra intsony izay hiafarany!
Ny akoholahy fataka amin’io voky sakafo ihany na dia mifampikopaka kely fotsiny aza an! Ny manodidina sy ny vahoaka no ho faty noana mitazana izany adin’akoholahy fataka sy fatsora izany!
WOAH, Denise 2en1! = « Tena mahery indry ry Dénise an! Tena miakatra mihitsy ny tambavin’ny zanak’i dada hanaovan-dry azy an! Angamba raha ny sitrapon’izy ireo dia ho potehina amin’i baomba artizanaly mihitsy indry ty an! Fa saingy araka ny ahafantaran’ny maro an-dry dia toy « Vatolampy azo handihizan’ny varatra indry, ka tsy matahotra ny mangoro-vitsika ». Ha! ha! ha! », ary toa ny tenanay ihany no lazainy sy tsikerainy!, loza ity marina!, tena MPAM’S MARINA, NY SATANA DEVOLY NO HIVAVAHANA SY HANDIHIZANA
9 juin 2012 à 13 h 11 min
Ka asain’i Fransman miandry dia MIESONA dia MIESONA Ravelonarivo a!!
zarako aza maratra!!
Manoana ny voalazanao aho Raozy ary manamafy fa tokony tsy misy mahataitra rehefa tena ao aminao ilay FINOANA
TSOTRA TOMPOKO o!!!MIVAVAHA!!! tsy misy hatahorana izany ary eto aho dia manararaotra ny fisaorako an’i namana
nanazava ny momba io omaly, somary tsy dia nifototra tsara aho teo mampandraisana ilay izy fa tena nandinika mafy aho
ary io izy io voalazan’i RAOZY io fa io mihintsy no VALINY hitako hoe: raha olona mivavaka ianao tsy misy HATAHORANA.
HAMAFISO NY FINOANA !!!mbola sy sasatra Atra manavaka ny vary sy ny tsiparifary.AZA MATAHOTRA!!!efa resy ireny e!!
efa resy raha izay DEVOLY, izay manaiky azy ihany no anazy fa rehefa MANDÁ azy inao TSY ANANANY FAHEFANA.
MINOA FOTSINY IHANY .
Tena mahery NY ZANAK’I DADA an! Tena miakatra mihitsy ny tambavin’ny DENISE TGV hanaovan’i ZANAK’I DADA azy an! Angamba raha ny sitrapon’IRY DENISE SATANA ireo dia ho potehina amin’i baomba artizanaly mihitsy ny ZANAK’I DADA an! Fa saingy araka ny ahafantaran’ny maro an’i DENISE TGV dia toy izy « NO AO AMBADIKAN’NY CLUB SATANIQUE IO, MEMBRE ACTIF NO SADY MPANORINA IZY!.Vatolampy azo handihizan’ny varatra, ka tsy matahotra ny mangoro-vitsika ». Ha! ha! ha!
9 juin 2012 à 17 h 20 min
Tena lasa mivadika mihitsy ny atidohakelin’i Masy anaovan’i Denise azy an! Jereo anie ry mpamaky e, avadibadiny eo ny phrases fa dia tsy miteny mihitsy izay lazainy. Dia toa an’i Valo mpitery ronono mihitsy e: tsy mahay miresaka. Tena tsy andriko mihitsy ilay fihaonan’i Valo sy ny Filoha hendry sy mahay Andry Rajoelina. Tena homontsamontsanin’i Andry manko ilay Valo badolahy miahan-kahana miresaka iny. I Andry indray tena mampiaiky ny rehefa ny fahaizany mandresy lahatra sy miresaka sady tena logique daholo izay lazainy rehatra an!
Rehefa ny kolikoly no atao hoe fahalalam-pomba dia aza mihevitra fa ny fivavahana dia hahafaka ny loza manjo ny tanintsika.
Ny Teny milaza fa raha miaiky ny helontsika isika ary miala amin’ny faharatsiana dia amin’izay fotoana izay ihany vao afaka manasitrana ny tanintsika Zanahary. Raha mbola ny tsy tokony hanao kolikoly (Mpitondra fivavahana, Mpitsara, Mpitandro ny filaminana…) no tsy mahita inona no maharatsy an’izany dia ozona no manjo ny tany. Tsy henoin’Andrimanitra akory izay vavaka atao eo.
Aoka tsy ho gaga amin’ny zava-mitranga fa raha tadiavina ny antsika malagasy.
9 juin 2012 à 23 h 02 min
Hevitra halefan’ny FRAMACON indray hanakorotanana ny sain’ny vahoaka indray io BIBY OLONA e! MPAKARA E! sns ONDRY tao amin’ny TIKO é! sns handrebirebena olona fotsiny izany rehetra izany satria efa tapidalan-kaleha ny HAT sy ny forongony! efa fomba fiady nataon’ny mpanjanatany taloha izany fa aza rebirebena ny olona.
Ny mpanomposampy efa nisy hatramin’izay ary ny mpitondra fivavahana ao anatin’ny Framaçon koa efa nisy hatramin’izay!!! hanontanio ingahy Ramino Paul sy i Andriamanjato Richard iza moa i tpl Razakaboana izay tanakavanan’i Ramino Paul dia ahoana ny finfandraisany???hanontanio ireo loandohan’ny pisorona Diakona sns amin’ny fiangon’dehibe tahaka Ambatovinaky Loterianina 67ha Ambohobao sns ,fa mpikambana amin’ny framaçon ny hakamaroany Tsy mahagaga raha izao no mahazo ny Firenentsika.
Hahirato ny masotsika Malagasy! fa ireo mpikambana ao ireo dia miray tsikombakomba amin’ireo menasofina rehetra etsy Akorondrano sns HAHIRATO NY MASO dia mba mihenoa tsara fa aza mihinana ambolony fotsiny sy mora rebirebena tahaka ny tamin’ny fanjanahantany.
9 juin 2012 à 23 h 24 min
F´angaha moa tsy hainareo hatrizay fa masina sy an´ny zanak´Andriamanitra ity Site mydago ity, maha romotra sy mampizodizody ny miaramilan´ny satana eto amin´ny Mydago eto foana , matahotra ny lehibeny Losifera sy andry rajoelina izy ireo ka miady mafy eto dia i Tanora, denise, kristelle, rabe, acado,peuples malgache, bogor … miova loko lava tahaka ny tanalahy fa tsy takona fa arakan´ny olona foana.
handroso izy ireo matin´ny zanak´i Dada , zanak´Andriamanitra , ihemotra izy ureo matin´i losifera sy andry rajoelina devoly lavanify.
Alohany miditra eto amin´ny mydago dia samy aloha mivavaka dia mba mandroaka devoly kely koa, Amin´ny anaran´i jesosy dia mivoka na mila teto ny devoly irak´i rajoelina mipoipoitra eto.
Haftra aoka mba ifan-defa teny sy andininy amin´ny soratra masina isika mlagasy na eto amin´ny mail izany na amin´ny Sms telephone, efa ady atao amin´ny satana io, ny soratra masina dia tahaka ny baiboly satrai teny nalaina tao anaty baiboly,
Ampiasao io ,indrindra fa ny tanora sy ray aman*dreny fa ady mahomby handevenana ny asan´ny satana.
Efa miantso ansika ankolaka hibebaka Andriamanitra.
Koa mazotoa TOMPOKO isany o!!vonjeo ny tanintsika E!!
Andao isika hanandratra vavaka miaraka daholo fa izay no andrasan’i lanitra amintsika.
Homba antsika Andriamanitra e!
10 juin 2012 à 0 h 22 min
Masiteny ! tena marina ve io voalazanao io???azonao ampiana fanazavana
kokoa ve??tsy mampino ahy mantsy ilay izy, sady misy anaran’olona tsy dia azoko loatra
azafady raha tsy mahadiso????
11 juin 2012 à 6 h 27 min
Marina ny anao ry Raozay raha nanambara fa « Ny olon’Andriamanitra aloha dia tsy voakasik’izany na ovina na ovina mihitsy », satria ny devoly dia fahavalo resy eo anatrehan’Andriamanitra. Ny tenako manokana dia tsy nahazoazo an’io TGV io mihitsy hatramin’ny voalohany. Tsy fantatro io rangahy io fa, ny mahavariana ahy dia tsy azokazoko fotsiny amin’izao ilay io. Vao azon’io rangahy io ny fahefana t@ alalan’ny fanonganam-panjakana dia hoy aho hoe « tsy misy zavatra vitan’io izany eo », ary dia voamarina izany ankehitriny. Ny reko ary mahatoky aho fa marina dia ny hoe « raha mba nalefa nianatra tany ampita izy io,dia tsy fianarana ara-dalana no nataony. Tany amin’ny sekolin’ny mpamosavy no nianarany » izany hoe marina ny voalaza etsy ambony manao hoe « mpanao magie mainty ». Tsy avy amin’Andriamanitra io fitondrana io satria tsy fifidianana no nahatonga an’io olona io teo.Ary marihana fa tamin’ny 72, 91, 2002 dia tena hetsiky ny vahoaka no nitranga. Fa ny 2009 kosa dia hitam-poko hitam-pirenena fa fitondrana nangalarina tamin’ny alalan’ny basy. Ary na dia teo aza ireo vahoaka nanohana an-draTGV dia, ireo vahoaka foza izany dia mbola betsaka lavitra noho ireo ny vahoaka manohana ny Filoha voafidy ara-demokratika izay nongotana maina fotsiny tamin’izao. Tsy hitako mihitsy izay olana raha niandry ny fifidianana izay tokony atao amin’ity taona ity. Ny Tompo dia tsy tompon’ny fikotranana fa tompon’ny filaminana koa dia mazava tsara fa tsy avy aminy izao fitondrana izao. Ary io « club satanique » io moa ve tsy io rangahy eo amin’ny fitondrana io no ao ambadika, satria toa tsy misy fanakanana, tsy misy fiarovana ny vahoaka fa dia avela manjaka fotsiny amin’izao ny devoly.
Tena lasa mivadika mihitsy ny atidohakelin’i Dénise dit Denise anaovan’i zanak’i Dada azy an! Jereo anie ry mpamaky e, avadibadiny eo ny phrases fa dia tsy miteny mihitsy izay lazainy. Dia toa an’i ANDRINARINA RADOMELINA mihitsy e: tsy mahay miresaka. Tena tsy andriko mihitsy ilay fihaonan’i RADOMELINA sy ny Filoha hendry sy mahay Atoa RAVALOMANANA. Tena homontsamontsanin’i Atoa RAVALOMANANA manko ilay ANDRINARINA badolahy miahan-kahana miresaka iny. I Atoa RAVALOMANANA indray tena mampiaiky ny rehetra ny fahaizany mandresy lahatra sy miresaka sady tena logique daholo izay lazainy rehatra an!
Hiresaka @ ADALA ve???dia i dada koa no hilatsaka ambany ohatra azy???
izay anie no tetika @’io fihaonana io e!! ny hampitoviana an’i dada @ FAKO toa
an’i domelina ireny e!!!aoka isika tsy ho voarebireby , sady fandaniana andro io e!! dia inona indray no manaraka??
raha hanao izany ny SADC maninona ??? sy mbola ampy azy e izao POROFO efa mitohaka @ tendana izao e!!!
eny ary mba aiza izay mba fandraisany anjara hamoahana ny GADRA sy ny RADIO sns reefa i dada ary no olany??
SADC anisan’ny efa SAKANA KOA E!!!efa VOAVIDY IREO!!!
Hanampy fanazavana aho mikasika ny framaçonerie eto Madagasikara: Raha najanaka an’i Madagasikara ny menasofina dia najanaka aratsaina indrindra koa ary nisy Malagasy izay NOKOLOLON’ny vazaha tamin’izany dia ohatra ny amin’izany ireo olona tao amin’ny PADESMA ary nokolokolo’ny vazaha ny zanak’ireo hianatra any Frantsa, navela hianatra sy holasa lavitra satria nomena ny fomba rehetra: nationalité française, bourse,grande école,ary moramora ny hahitany ny asa any Frantsa sns satria « les fils ou les enfants d’un frère » rehefa tonga eto antanindrazana dia mahazo ny toerana ambony any amin’ny entreprise lehibe eto M/scar niaraniasa tamin’ireo aho…
Jereo fa tsy voakitikitika mihintsy ny TOMBOTSOAN’ireo na karana na vazaha izay voalazako etsy ambony sns SOKAFY NY SOFINA sy ny MASO ntsika Malagasy,misy malagasy izay tena miray petsapetsa amin’ireo ary tsy hafaka miala satria efa nanao FATIDRA tamin’ireo ary MATY raha mivadika amin’izany nisy DVD izay nozarainay maimaimpoana teny MAGRO ary nojerenareo teny Prof Zafy Albert » Villa Elisabeth » IZAHAy no nanome izany maimainmpoana mba hisokafan’ny MASO sy ny SOFINtsika Malagasy.
Ny anarana tsy hanome izany izahay fa fantatray fa mamaky ity MYDAGO ity koa ry zareo…fa ny tena niharihary dia i tpl RAZAKABOANA izay nanetsiketsika ny fankalazana ny fatserovana ny nandefoanana an’i RASALAMA MARTIORA niaraka tamin’i Ramino Paul Mpitandrina ,rehefa maty izy dia nandefa fanambarana tamin’ny gazety koa ny framaçon malagasy fa maty ny GRAND MAÎTRE RAZAKABOANA.
Hambaranay eto fa tsy izy irery no ao anatin’io fikambanana mpanompo devoly io fa maro izy ireo!!!ary mpanomposampy amin’ny fomba mbazaha « culte satanique basé sur l’ésotérisme »
Mody hafangaro ny fivavahana kristianina sy ny ésotérisme ( manaova fikaroana izay te hafantatra bebe kokoa…) SOKAFY NY MASO sy NY SOFINA fa misy eto amin’ny firenentsika io ZAVADOZA io nandritra ny taona maro efa ho 60taona izay.
Ireo no FANETRY BE ny Firenentsika ka raha te handroso isika dia ireo no HARINGANA amin’ny fomba rehetra… izahay dia mampiharihary ny zavatra hafenina rehetra eto amin’ny firenentsika ka anjaratsika ny miady amin’izany!!!
12 juin 2012 à 22 h 21 min
Tsy nampoiziko???ary ahoana no nahafaty any zanak’i Razakaboana ??
misy hidiran’io tantara io ve????tokony ho tsikarahana daholo ny mpikambana ao
aloha dia izay vao hajedaka tsikelikely, tany avaratra tany koa izy io no efa nalaza taloha be ary mbola misy tavela
hatr@izao fa kosa efa mihavitsy ary efa mba lefiefy t@ andron’i dada.tsy te hanazava betsaka aho fa mahariko2.
vahiny dit :
28 juin 2012 à 5 h 29 min
n’importe quoi denise,ary andry rajoelina filoha hendry sy ray amandreny,tes yeux sont bouchés par les merdes de ce putschiste ou quoi, quitte là
DYLER SOULTANALY dit :
25 août 2012 à 9 h 20 min
Mahagaga ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana ny hanomponareo ireo olona 2 voalaza filoha mpirenena ireo.Olona samy mpanota ireo mitovy amintsika ihany, ny heriny ny zava miafina ao ambadik’izy ireo koa dia tsy misy mahalala, ary ny tena mampalahelo dia ny fiangonana Kristianina (FJKM)no tena ialofana.Ita na isika miresaka eto aza dia manonona fahatany ny anaran’i Jehovah Andriamanitra, ita ary tsapa fa ny ao anaty fo sy fanahy rehefa mamaky ireo teny sasany ato dia maloto, Kristianina ve enao dia ifanenjika???? Kristianina ve enao dia ifanaratsy???? Kristianina ve enao dia maloto fo????
Ry Malagasy namana mivavaha ianao fa efa tonga ao aminao koa ny fanahiny ratsy, tsy tokony isika no ifanenjika sy ifanaratsy eto,
Ny tokony ataontsika dia ny hangataka amin’i Jehovah Andriamanitra sy i Jesosy Kristy ny hanomezany olona hendry sy tia tanindrazana itondra ity firenena Malagasy ntsika ity.
Ny fangatahana famelankeloka hoan’i mpitondra rehetra sy ny vahoaka manontolo.
Ny sehatra internet tahaka itony dia sehatra tokony entina ifaneraserany vahoaka itaiza ara-panahy araka ny didin’Andriamanitra ary koa entina hampandroso ny firenena.
Koa samia mandinika ny tenany
Samy ho tahian’i Jehovah Andriamanitra anie isika
Marina ny anao DYLER fa tsy tokony hifanenjika raha mbola samy olombelona tokoa ary izaho no voalohany fa saingy hevitra no ampiadiana ka hatramin’izao aloha dia ny filoha Ravalomanana ihany no mbola nandrara ny mpomba azy tsy handranitra ireo mpomba ny ankilany sy ny milisy.Manana fahendrena ny PMR matoa mbola tsy miady an-trano ny malagasy matoa mbola ny FDR no mbola fitaovana entin’ny SADC hamahana ny olana.Nandefitra ny filoha ka raha hifidy eo amin’izy roa mihoatra dia I Ravalomanana no mendrika izay fantatra koa fa tsy tonga lafatra akory.
Milaza ianao etsy ambony tokony hivavaka amin’i Jehovah Andriamanaitra hangataka azy ny hanome olona hendry sy tia tanindrazana.Ataoko fa manana an’ireo toetra takianao ireo Ravalomanana.Mino mihintsy aho fa misy olon-kafa fa tsy maintsy fantatry ny vahoaka izy ireo vao mety ho fidim-bahoaka.
25 août 2012 à 12 h 42 min
Mahonena itony olona MPISANDOKA ny anaran’I » JEHOVA ANDRIAMANITRA »,
nefa mankahala ny OLON’ANDRIAMANITRA, efa tsy laitran’ny balan’ny famahanan-
dalitra intsony ny aty tompoko o!!!ny TENA VAHOAKA MALAGASY DIA TOKA- PO ohatra ny siny ka tsy mahalala
afa tsy ny RANO, MAZAVA VE?TSY MBOLA TERAKA ILAY HISOLO An’i DADA RAVALOMANANA, aza MAPME!
resy angaha???sa rano ny kapa???nahazo kapoka marivorivo ve???OHATRA an’i lohan’i zanakisoa mihintsy io
manoratra io??mety ho izy mihintsy io??matatesa vali-kitsaka!!maika fa ranomasina ???vao ranom-poataka aza
dia manonja sahady???izahay mahazaka fa ny fitsipaky ny rambony no tsy ho tanty,dyler aho e!!!hi!hi!hi!!efa zatra
misandoka fahefana ka ny anaran’Andriamanitra avy no sandohana.Ary nahoana no malaky mitapify aty mbadika be aty??
17 juillet 2014 à 6 h 21 min
Tsy ny fimonomonana no hisian’ny vahaohalana fa ny fanolorantsika ny fontsika ho an’Andriamanitra ihany.Aoka ivavaka isika ho an’ity firenantsika ity mba ho afaka eo ambny vahahohon’ny satana:
Fitiavana;Fanetrena;Fahari-po;Fandeferana.Mialà @ fitiavam-bola fa ny vola no fototry ny ratsy rehetra.
Ny fahasoavan’ny Tompo anie ho amintsika tsirairay avy
Précédent Article précédent : Raharaha TIKO : » hanaovana takalon’aina ny Filoha Ravalomanana » hoy Me Hanitra
Suivant Article suivant : NY FFKM IHANY NO ELANELAM-PANAHY